Posté par Lalasoa 2017-05-10 09:49
Marina izany! Isika tsy maina fa lena...
Posté par Angie 2017-05-09 09:31
Tena tohina ny foko namaky azy ity fa tena nitovy ny tao an-tsaiko raha nahare fa namoy ny ainy tamin'ny lozam-pifamoivoizana raha nitondra moto iny ny rain-jaza (telo mianadahy) mpiaramianatra amin'ny zanako. Nangovitra aho nipararetra satria ny vadiko koa nitondra moto ary 3 koa ny zanakay.miantso azy impolo aho tsy nahazo, tena nitomany nifofo mihitsy. Rehefa nahazo hafatra tao amin'ny whatsapp ny sekoly vao niaina kely fa hoe Tsy ny vadiko izany na dia nalahelo ilay ankizy ihany aza. Lasa resakay mivady nandritry ny andro manaraka ny hoe raha izaho no Lasa aloha na ianao dia ahoana no atao? Satria moa ny fihaviana sy fomba tsy mitovy.ny tena rehefa azom-pahoriana dia mety tsy hahadinika ka mba tsy hampisy fahasahiranana ilay tavela irery amin'ireto ankizy dia aleo asiana resaka. Koa satria hirariana fa ho marina ilay fiteny hoe ny hamisavisana ny ratsy hiavian'ny soa dia namisavisa Teo mihitsy izahay. Enga anie mba ho ela vao ho Tonga ny antso fa mbola maro ny adidy amin'ny kilonga saingy raha toa ka Lasa aloha dia mba efa nisy izay kinasa. Firarian-tsoa sy fizarana Fitiavana no atao an-doha ka na inona mihantra na inona midona isaorana ny Tompo efa nanome fotoana. Aleo ny anio no banjinina fa ny ampitso tsy hay raha mbola ho hita. 😍
Posté par Lalasoa 2017-04-08 15:43
Eny, marina be ny vinavinanao fa nahatonga saina iny omaly iny. Amin'ny andro mahory, hono, mieritrereta.
Posté par Lhl Tsyresy 2017-04-08 14:32
Lalina sy mendri-piderana tokoa izany eritraritrao izany. Ohatry ny lasa ny saiko hoe mety ilay loza vokatry ny nataon'ilay mpampihorohoro nanitsaka olona tamin'ny kamiô tao andrenivohitr'i Soeda angamba no nahatonga an'io eritreritra io? Izaho izay manoratra koa dia matetika tojo eritreritra hoe « Raha maty androany aho... ». Indrindra indrindra rehefa misesisesy matetika ny horohoron-tany mahery vaika mampipararetra eto amin'ny tany itadiavako ravin'ahitra, dia hoy aho hoe: « Raha maty androany aho... dia asa re... ». Indrindra koa isaky ny heno fa hoe misidina eny amin'ny lanitra indray ny balafomanga fandrahonana alefan-dry zareo ao Korea Avaratra, dia hoy aho hoe: « Raha maty androany aho... dia asa re... ».